UPDATE: Xoogaga Ahlu-Sunna oo la wareegay Saldhiga booliska Dhuusamareeb | HalQaran.com
UPDATE: Xoogaga Ahlu-Sunna oo la wareegay Saldhiga booliska Dhuusamareeb
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Ciidamada Ahlu Sunada Gobolada Dhexe ayaa si ku meel gaar ah ula wareegay Saldhiga Booliska ee Degmada Dhuusamareeb, ka dib xiisaddii xalay ku soo korortay Xarunta Gobolka Galgaduud.
Ciidamada Ahlu Sunna ayaa xalay gacan ku haynta Saldhiga Dhuusamareeb dib ugala wareegay Ciidamadii Booliska Galmudug, oo markii horeba ay iyagu ku wareejiyeen.
Ciidamada Ahlu Sunna ayaa isla xalay dib ula wareegay Xarunta Degmada Dhuusamareeb, iyadoo ciidamo yar oo kuwa Galmudug oo ku sugnaa ay ku amrayn in ay isaga soo baxaan.
Ciidamada Dowladda Somaliya ee ku sugan Magaalada Dhuusamareeb ayaa fiidnimadii xalay rasaas ku furay Xero Inji, oo ka mid ah meelaha uu magaalada ka degan yahay Madaxa Xukuumadda Galmudug, Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan.
Tani ayaa sababtay in Magaalada Dhuusamareeb laga dareemo xaalad kacsanaan ah, iyadoo tallaabada lagu rasaaseeyay Xero Inji ay ka caroodeen Madaxda Ahlu Sunna iyo kuwo Galmudug ee ku sugan Magaalada Dhuusamareeb.
Xiisadan ayaa sidoo kale keentay in albaabada loo laabo xarumaha ganacsiga ee magaalada ku yaala, waxaana aad u yaraaday dhaqdhaqaaqii dadka iyo gaadiidka ee Magaalada Dhuusamareeb.
Shacabka reer Dhuusamareeb ayaa ka baqdin qaba in magaalada uu ka qarxo dagaal u dhaxeeya Xoogaga Ahlu Sunada Gobolada Dhexe iyo Ciidamada Dowladda, inkastoo ay socdaan dadaalo lagu doonayo in xiisadda lagu qaboojiyo.
Ahlu Sunna la wareegtay
Saldhiga booliska Dhuusamareeb